Omenala Mere Marathon Medal Na-agba Egwuregwu Medallions
Agba osisi: ochie nickel
Okike: nkedo na-anwụ anwụ, enweghị enamel
Omenala siri ike nke enamel:
Mgbe ụfọdụ a na-akpọ epola mkpọ, n imomi cloisonné atụdo ma ọ bụ nwụọ gburu atụdo na ike enamel, bụ ụdị craftworks maka pin baajị. Ihe nkedo enamel siri ike dị mma na aka aka na-eji agba PMS emeju ma sie ya ruo mgbe a gwọchara enamel ahụ. Mpaghara ọla ndị akpọlitere na agba ndị ahụ n'otu larịị wee jiri aka na-egbu maramara were were ọla edo, ọla ọcha ma ọ bụ ọla kọpa.
Ihe nkedo enamel siri ike nwere ọdịdị na-adịgide adịgide na ogologo oge. Ha nwere oke ọhụụ a na-ahụta n'ihi oke agba ha, nke kachasị mma maka ihe omume, atụdo mgbakọ, eserese eserese, pin sorority, pinị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na atụdo ụlọ ọrụ.
Site na ahụmịhe ọrụ anyị bara ọgaranya na azịza echebara echiche, ugbu a, a na-ewere anyị dị ka onye na-atụkwasị obi maka ọtụtụ ndị na-achọ ịre ahịa maka OEM Customized China Customized Wholesale Metal 3D Medallion Coin Ust Soft Enamel Souvenir Challenge Coin (189), na-agbaso usoro ihe ọmụma azụmahịa nke 'ndị ahịa nke mbụ, buru ụzọ gaa n'ihu', anyị ji obi anyị anabata ndị na-azụ ahịa si n'ụlọ nke gị na mba ofesi iji kwado anyị.
OEM ngwaahia China Challenge Mkpụrụ ego Ngosi Case na llema Aka Mkpụrụ ego Plastic uwe price, Na ezi mma, ezi uche price na ezi obi ọrụ, anyị na-enweta ezigbo aha. A na-ebupụ ahịa na South America, Australia, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na wdg. Obi ụtọ na-anabata ndị ahịa n'ụlọ na mba ọzọ na-akwado anyị maka amamiihe n'ọdịnihu.
Nke gara aga: Ahaziri ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ
Osote: Mara mma Animal Hard Enamel Custom Metal Keychains
5k Na-agba ọsọ Ọla
Ngosipụta Na-agba Ọsọ
Onyinye ọla edo ọla ọcha
Ọsọ Na-agba ọsọ